Ireo Shinoa Manampahefana Mpanidy Ny Tranonkala Ara-tsaina ‘Gongshi’, Mitarika Ireo Mpanao Aterineto Mba Hanontany: ‘Fiafaràn’ny Marimaritra’ ve Izao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2016 15:31 GMT
Fangon'ny tranonkala “Gongshi”
Tsy azo idirana intsony ny pejy fandraisan'ilay tranonkala ara-tsaina manana ny maha-izy azy “Gongshi” na Marimaritra, nanomboka ny 1 oktobra, Fetim-pirenena Shinoa. Azo eritreretina ho fanahy niniana sy ohatra fotsiny ilay fanakatonana raha ny fotoana nibahanana no jerena. Marobe ireo mpanao aterineto no nanambara fa midika ho “fiafaran'ny marimaritra” ny tranga miseho.
Raha tsy azo nidirana intsony ny pejy fandraisana tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, mbola nandeha kosa ireo rohy mankany amin'ireo lahatsoratra manokana an'ny tsirairay.
Natomboka tamin'ny 1 Septambra 2009 ary tantanan'ny vondrona Media Lide Consensus , ny Gongshi amin'ny ankapobeny soratana ho an'ny mpanjohy ao anatin'ny governemanta Shinoa sy ny Antoko Kaominista. Miaraka amin'ireo faritra atokana ho an'ireo raharaha maneran-tany, ireo fianarana ao Shina, ary ny “Fijerena indray ny Tantara”, anisany t ao anatin'ireo mpanoratra ao amin'ny Gongshi ireo akademisianina, mpanao gazety matihanina, mpanoratra fanta-bahoaka ary ireo manampahaizana manokana momba ny lalàna. Politisiana liberaly no ankamaroany. Iraka tontosain'ilay gazety ny “hikaroka marimaritra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanovàna goavana”.
Gazetiboky zaraina amin'ireo fantsona manokana fisoratana anjara sy ireo mpanjohy kinendriny manokana ary ireo mpiasam-panjakana Shinoa, ireo Tale Jeneralin'ireo orinasa, ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny Tafi-panafahan'ny Vahoaka ary ireo sampana hafa mitovitovy amin'izany. Mifandray amin'ilay gazetiboky Leader ao Hong Kong ihany koa ilay tranonkala, izay nampitsahatra ireo asany efa ho am-bolana maro izay rehefa niasa nandritra ny roa ambiny folo taona.
Mitovitovy amin'ny gazetiboky reformista Yanhuang Chunqui, izay noraisina an-tànana indray ny volana Jolay 2016 taorian'ny bemidina nataon'ireo manampahefana tamin'ireo biraony sy nakàny ny fifehezana ilay tranonkala, ninoana ho nifandray amin'ny sehatry ny angovo avy ao anatin'ny Antoko Kaominista Shinoa ny Gongshi. Noforonina ho toy ny andrana iray anaty “fanapahankevitra jadona” io, fomba filaza akademika milaza fandraisana anjara amin'ny fananganana marimaritra amin'ny fiatrehana ny krizy sosialy sy politika ao anatin'ny fitondrana jadona.
Manana fifandraisana maro any amin'ny faratampony ao amin'ny CCP i Zhou Zhixing, iray amin'ireo mpamorona ny Gongshi sady Tonian-dhatsoratra ao amin'ny Leader. Nohazavain'i Zhou ao amin'ny WeChat ilay fikatonana :
Tian'ireo tompon'andraikitra ny hanakatonanay ny tranonkala, lazaina fa manaparitaka hevitra diso ilay vovonana. Noho ny fandrahonana, nakatonay. Tatitra avy amiko ity.
Tsy noeritreretina ny fanakatonana ny pejy fandraisana. Vao tsy ela akory izay, ny 29 Septambra lasa teo, nanambaran'ny Gongshi tao amin'ny kaintony amin'ny media sosialy ireo antsipirihany mikasika ny fitsidihana iray tany Etazonia, izay nahitàna ny fitsidihana an'ireo anjerimanontolo vitsivitsy mba hanadihadiana ireo mpanao fikarohana sy ireo manampahaizana, mikasika ny fomba fahitàny ireo fifandraisana misy eo amin'ny shinoa-amerikana aorian'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana.
Nizara ireo tombatombany mikasika izay tena antony marina nahatonga ilay fanakatonana ireo mpanaramaso. Yue Wenxiao, mpanoratra iray avy amin'ny Falun Gong mifandray amin'ny tranonkala mpanohitra, Feon'ny Fanantenana, nitsimpona sy nanangona lisitra iray mikasika ireo tantara ara-politika saropady navoakan'ny Gongshi ny taona 2016. Ahitàna ny lohateny hoe:
“Boky Voarara sy Famirapiratan'ny Tena Manokana” [Ang] an'i Zhu Dake, mpampianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Shanghai Tongji
“Eny ho an'ny Fifidianana. Tsia kosa ho an'ny Fifantenana: Fisaintsainanan momba ny Fifidianana Filoham-pirenena tao Taiwan” an'i Lui Junning, Shinoa manampahaizana liberaly avy any amin'ny tanibe Shinoa.
“Tsy maintsy atsangna eo amboninn'ny fandàvana ny fifehezana fahamarinan-toerana ny ady hanoherana ny kolikoly” an'i Sun Liping, mpampianatra avy ao amin'ny Anjerimanontolo Tsinghua
“Iza no namatsy ny Revolisiona Kominista Shinoa”, lohahevitra manokana ho an'ilay tranonkala”
Mazava tsara fa saropady ireo lohahevitra ireo ary tsy ho azo avoaka amin'ny ankamaroan'ireo media ao Shina. Tsy maintsy avy amin'ireo mpitarika ambony ny habaka ho an'ireny karazana fanapahankevitra politka ireny. Saingy, nihena ny habaka tahaka ireny naomboka tamin'ny nanamafisan'ny filoha Xi Jinping ny fahefany tamin'ny 2012.
Yuan Bin, Shinoa iray avy any amin'ny tanibe ary sesitany politika ao Taiwan, no nanambara ilay fanakatonana ho toy ny mariky ny fiafaràn'ny tetikasa reformista amin'ilay vohikala mpanohitra, Epoch Times:
Nabaribarin'ny fampanginana tsy ela akory natao tamin'ny kabarin'ny CCP fa tsy tiany akory ny hanangana marimaritra iraisana miaraka amin'ireo reformista izay mikatsaka marimaritra avy ao anatin'ny antoko. Tsy hoe fotsiny tsy te-hanangana marimaritra iraisana izy, fa tsy manome alalana ihany koa an'ireo izay maniry hanangana marimaritra amin'ny fanavaozana demokratika, tsy sahy manao fanamby hanohitra ny fotokevitra jadon'antoko tokana tsy hisy. Mandefa hafatra iray ho azy ireo [mpitaki fanovàna], ny fampanginana ireo mpisolovava ny zon'olombelona, ny fakàna indray ny fifehezana an'i Yanhuang Chunqui sy ny fanidiana ny Gongshi: tsy manana marimaritra miaraka aminareo aho. Tsy misy fomba ho ahy hifidianako ny lasitra Tandrefana. Eto amin'ny taniko, tsy hanome alalana mihitsy ny fisian'ny faritra manokana ho an'ireo politika sy ireo fiheverana aho.
Ao amin'ny media sosialy Shinoa, maro no nizara ny fahatsapany hoe manamarika ny fiafaràn'ny vanimpotoana iray ilay tranga :
Na misy tambajotra maro manohana tombontsoa samihafa mitranga aza, sarotra ny hahitàna tambajotra iray hahafahanao mahita eritreritra tena ara-tsaina. Tato anatin'ny taona roa farany, nitsidika an'i Gongshi foana aho isanandro ary tampoka teo nikatona izy. Raha tsaraina araka ny toe-draharaha ara-politika izany, an-dalana miverina amin'ny lasantsika isika. Efa tsy afaka niomana aloha akory aho hoe hitranga haingana be loatra ny fahatongavan'ilay fitontonganana. Saingy afaka miverina amin'ny vanim-potoanan'i Mao ve ny fiarahamonintsika?
Nitsahatra tsy niasa ny Gongshi. Tsy manana sosialisma siantifika sy demokrasia sosialista intsony i Shina.
Raha mbola mitohy miasa ireo rohy mampifandray amin'ireo lahatsoratry ny tsirairay, maro no mino fa hiverina ilay tambajotra na noraisin'ny tarik'ireo “tsy mivadi-belirano” sy “mpanara-drenirano”, mifampizara anjara iray mitovitovy amin'ny Yanhuang Chunqui. Amin'ity raharahan'i Yanhuang Chunqui ity, niseho tampoka ilay fakàna ny fifehezana, tsy nisy fandraisana anjara na fifanarahana tamin'ireo toniandahatsoratra mitantana azy.